Leensaa Guddinaa Tumsaa:Mucaan akka abbaasheetii kun dubbiinnsheellee akkasuma bareeda. Onneefi sabboonummaan isheen garaadhaa qabdu nama boonsa. Shamarran akkasii Oromoon baayifachuu qaba. – Beekan Guluma Erena
Leensaa Guddinaa Tumsaa:Mucaan akka abbaasheetii kun dubbiinnsheellee akkasuma bareeda. Onneefi sabboonummaan isheen garaadhaa qabdu nama boonsa. Shamarran akkasii Oromoon baayifachuu qaba.	Beekan Guluma Erena
Audio/Video/Image Category May 2, 2016May 2, 2016
11SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Mucaan akka abbaasheetii kun dubbiinnsheellee akkasuma bareeda. Onneefi sabboonummaan isheen garaadhaa qabdu nama boonsa. Shamarran akkasii Oromoon baayifachuu qaba.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa11SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← GAMMACHUU LAKKUU…Jaarmiyaaleen Oromoo walitti dacha’an
HAATI MANAA OBAAMAA AKKUMA JAARSAHEE DUBATTUU CIMTUUDHA. →